2018 Guddiga Vitals USMLE Review [Waa in Arag Ka hor inta Gadashada!]
Guddiga Vitals USMLE Review
Guddiga Vitals USMLE waxay bixisaa ardayda bangiyada su'aalo badan oo u Tallaabada ugu 1, Tallaabada 2, iyo Tallaabada 3 imtixaanada. Su'aalaha dhaqanka oo laga helay ilo khabiir ay la socdaan sharaxaad faahfaahsan yimaadaan si ay u caawiyaan ardayda si sax ah u bartaan sababta jawaabaha gaar ah oo sax ah ama khalad yihiin.
Ardayda dhexeeya Mode beegay iyo Mode Review waxay dooran karaan marka jawaabay su'aalo ah ama imtixaan ku dhaqma, oo dhan ugu qiimaha uu gorgortan.
1. Imtixaanada Practice beegay
3. Dhibic Isbarbar Tool
3. Free Study Qalabka
5. Dammaanadda Pass
1. No Video Casharrada ama Waxbarashada Content
Tallaabada 1, Tallaabada 2 & Tallaabada 3 Qiimo u goynta:
Guddiga Vitals USMLE Review burburka
Ardayda arki kartaa saacad suaal kasta oo gaar ah lagu daro saacad ah ee imtixaanka dhaqanka oo dhan si ay u caawiyaan shaqeeyaan raadinta orod saxda ah si ay u guulaystaan ​​on imtixaanka. Su'aalaha dib u eegis guddiga waxaa loogu talagalay si loo jilo labada heerka dhibaatada iyo waqtiga loo baahan yahay su'aalaha dhabta ah ee imtixaanka. Sida imtixaanka dhabta ah, waxaa macquul ah in ay dib u soo guurto ka mid ah su'aalaha iyo jawaabaha aad beddesho.
Yimaado faa'iido dhabta ah ee barnaamijkan ee sharaxaad faahfaahsan iyo jawaabaha loogu talagalay hal su'aal kasta dhaqanka. Ardaydu waxay leeyihiin doonaa yaraanta jirin fursado lagu hirgaliyo, inay helaan 1,500 su'aalo u Tallaabada ugu USMLE 1, 900+ u Step 2, iyo 1,200+ Tallaabada u ah 3 imtixaanada. Su'aalaha ku qoran yihiin barbarta takhaatiirta, ama ka keentay daabacayaasha caafimaad iyo hay'adaha cilmi-baarista yimaado.
Ka dib markii aad ka jawaabay su'aalaha dhaqanka iyo tijaabada la dhaqanka ah, waxaad is barbardhigi kartaa qaab aad u ah in ardayda kale qaadato imtixaanka USMLE. Your qaab kale u saamaxaysa barnaamijka soo jeedinaya su'aalo dhaqanka ee shaqsiyeed waxbarasho oo dheeraad ah, si aad xoogga saaraynaa meelaha kuwa ay ka faa'iideysan doonaan ugu yimid dib u eegis.
BoardVitals siinayaa ardayda u helaan in ay su'aalo ku dhaqanka free yar ka imtixaanka kasta, Hanuuniye free su'aal Tallaabada ugu USMLE 2 iyo Tallaabada 3 imtixaanada, iyo talo iyo Talooyinka Qaadashada imtixaanada kala duwan. Waxa kale oo ay boostada Tallaabada ugu USMLE 3 Nuxukiisa (ka USMLE) ay site for laguugu sahlo.
Qiime jaban ah oo kaliya $79-$199, Vitals Board’ Koorsooyinka udiyaar waa xulashada ugu raqiisan kuwa aan dib loo eego. Waxay yihiin dheeri weyn barnaamijka waxbarashada adag ee imtixaanada USMLE, dhab ahaantii, Guddiga Vitals ku talinaysaa website-keeda in aad isticmaasho bangiga su'aal ay lala qalabka kale ee waxbarasho.
Guddiga Vitals taagan by saarkooda iyo bixisaa mobilada la dheereeyey si xor ah u koorsooyinka haddii aadan ku gudbin imtixaanka oo aad baranayso. Macaamiisha Isreebreebka xaq u xidhid bilaash ah waqtiga ay asal ahaan ka soo iibsatay. Waxa aad heli sii helaan ilaa iyo inta aad u baahan tahay inaad ku gudubto imtixaanka shahaado ama guddiga. Just gudbiso koobiga warqadda ama aragto in uu sheegayaa ma aad ku gudubto imtixaanka. Fadlan eeg website-ka Guddiga Vitals wixii faahfaahin ah oo dheeraad ah oo looga baahan yahay damaanad baas.
Koorsooyinka udiyaar Kuwani gaar ah ee bangiga su'aal digital ka kooban su'aalo dhaqanka iyo sharaxaadaha, baaritaano dhaqanka iyo. Ardayda ayaa rajeynaya in ay helaan casharo nool ama duubay ama wax dib u eegid si ay u caawiyaan heli dulmar guud ee imtixaanka waa in ay eegaan meelo kale.
Inkastoo bangigu su'aasha laga soo geli telefoonada gacanta, ma jiraan wax app mobile si ay u sahlan ee ardayda waxbarasho. Flashcards, kulan ama qalab kale oo dib u eegis ku fashion badan oo la qaadan karo u noqon lahaa feature fiican.
Haddii aad raadineyso weeyna su'aalo badan oo ku dhaqanka qaab ah in uu yahay mid run ah in imtixaanka dhabta ah ee qiime la awoodi karo, Vitals Board’ fursadaha udiyaar online for Tallaabada ugu USMLE 1, Tallaabada 2 CK iyo Tallaabada 3 imtixaanka yihiin doorasho wanaagsan. Waxad heli doontaa fursado live, muxaadarooyinka ama la dhexgalo macallimiinta, laakiin waxaad heli doontaa badan oo dhaqanka su'aalo koowaad ee heerka iyo imtixaanada dhaqanka in ku dhow wax dhabta ah waa. Ka jawaabidda su'aalaha dhaqanka iyo dib u sababta jawaabaha gaar ah oo sax ah ama khalad yihiin waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ay u diyaar garoobaan imtixaanada USMLE.
Ii kaxee Guddiga VITALS USMLE!
1,500 Tallaabada USMLE 1 Review Board Su'aalo
900+ Tallaabada USMLE 2 Review Board Su'aalo
1,200+ Tallaabada USMLE 3 Review Board Su'aalo
Awoodda Flag Su'aalaha Review dheeraad ah
Wuxuu daboolaa oo dhan Categories soo bandhigay on Imtixaanada ah
Jawaabaha iyo faahfaahin ah ee Su'aal kasta
Dooro From beegay Mode iyo Review Mode
Practice jeediyey Su'aalaha soo bandhigay ku saleysan Performance
Price Isla Talaabooyinka All (mid kasta si gaar ah u iibin)
Access for 1 bishii: $79
Access for 3 bilood: $129
Access for 6 bilood: $199
VITALS GUDDIGA DIB U EEGIDDA USMLE
4. 10% Off Qalabka Study
5. Free Study Qalabka
https://crushtheusmleexam.com/wp-content/uploads/2014/11/BoardVitals.png 400 400 James Edge https://crushtheusmleexam.com/wp-content/uploads/2017/01/Crush-The-USMLE-Logo-300x120.png James Edge2018-01-10 22:00:002018-01-10 22:00:00Guddiga Vitals USMLE Review
Monica ayaa sheegay in:
Ma u aragtaa ardaydu waxay u isticmaalaan Guddiga Vitals aan fursadaha live iyo wanaag la sameeyo imtixaanka?
Haa, badan oo ardayda samayn ganaax kaliya la Board Vitals. Haddii aad raadinayso su'aalo dhaqanka weyn iyo imtixaanada qiimo wayn u raaci Board Vitals. Nasiib wacan!
Burburin USMLE Review Kaplan USMLE Review